Guddida dhaqaalaha ee G. Wakiillada oo jawaab ka bixiyey hadalkii madaxtooyada | Somaliland.Org
Guddida dhaqaalaha ee G. Wakiillada oo jawaab ka bixiyey hadalkii madaxtooyada
April 29, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Guddida Dhaqaalaha ee Golaha Wakiillada Somaliland ayaa jawaab ka bixiyey warsaxaafadeed uu soo saaray Afhayeenka Madaxtooyada, kaas oo ay Madaxtooyadu si kulul ugaga jawaabtey hadal ka soo yeedhey guddida oo ku saabsan Tacriifadda Dekeddu kordhisey iyo koru kaca qiimaha Shidaalka.
Guddida Dhaqaaluhu qoraal ay maanta soo saareen oo ay ku iftiimiyeen hadalkoodii Madaxtooyadu sida cabban uga jawaabtey, waxa uu u qornan yahay sidan:
“Baarlamaanada marka ugu horraysa waxa loo sameeyay in ay dadweynaha u ilaaliyaan cashuuraha ay xukuumadu qaado,xilligaas oo ahaa xilligii boqoradu ay ka talin jireen yurub waxay si xishood darro ah ugu takri-faleen cashuurtii ay dadka ka uruurin jireen.
Xilligaas waxaa la abuuray baarlamaano dadka ka wakiil ah oo ka ilaaliya boqoradii ma-dhergayaasha ahaa hantidii yarayd ee dadweynaha.
Aaraartaas ka dib, waxa warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada 26/04/08 ay ku eedaysay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada waxa ay ku sheegeen khiyaamo qaran weliba iyadoo madaxtooyadu magacawday shakhsiyaad ka tirsan gudiga dhaqaalaha.
Haddaba waxay madaxtooyadu iska indha tirtay inay ka jawaabto dhamaan mushkilaadka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka ka taagan ee gudigu ka hadashay,kuwaas oo badankooda ay madaxtooyadu abuurtay.
Khiyaamo qaran wa kelmad ay ku dhuuntaan xukuumadaha fashilmay marka la yidhaahdo ka warama hantidii ummadda,waxay madaxtooyadu si gaar ah u xustay xildhiban Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar-Xaashi laakiin waxaanu u sheegaynaa inuu todoba sanadood u xidhnaa waxa loogu yeedhay khiyaamo qaran ka dib markii uu u gurmaday cisbitaalka hargeysa 1982-dii isaga iyo saaxiibadii iminkana waxa qudha ee aanu nidhi waxa weeye xagee ayay martay cashuurtii ummadda laga ururiyay? Meeyay xisaab-xidhkii? Meeday Miisaaniyadii? Xaga martay bedelkii lacagtii Burco ee miisaaniyadii sanadkii hore goluhu ansixiyay? Xagay ku dambeysay 2%-kii Sool iyo Sanaag bari cashuurta loogu kordhiyey ee Goluhu ansixiyey? Maxaa xoolaheennii nin Carbeed loogu xidhay qiimaha rakhiiska ah iyadoo adduunka wax waliba ka qaali garoobeen? Meeday Miisaaniyaddii hay’adaha Madaxtooyada sida gaarka ah u hoos yimaadda, sida Dekedda iyo Haamaha ee aanay jirin cid wax ka ogi?
Inta aanad noo jawaabin horta ceebta mooskaaga taalla iska basri.
Waa dhab oo cashuuruhu waa waxa ay dowlad waliba ku shaqayso, laakiin, marka ummaddii lahaydna laga soo qaado, jeebab gaar ahna ay ku dhacdo waa markaa marka ay xaaraanta tahay. Haddaba, cashuurtu iminka waa cad ummaddiina ka yimi, meel ay martayna aanay cid isla ogi jirin.
Waxaannu Guddi Dhaqaale ahaan dadweynaha Somaliland ku ammaanaynaa inay dhinacooda si waddaniyadi ku jirto u bixiyaan cashuurta, laakiin, dhinacii xukuumadda laga la’yahay inay ummadda ku celiso iyo inay ka xisaabtanto midna.
Mudane Madaxweyne, si sharciyaddu u caddaato u dhug yeelo qodobadan:
Qodobka 14aad ee dastuurka wuxuu leeyahay; Waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliif ah waxa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada, sidaa darteed cashuur aan xeer-dejinta jidayn lama qaadi karo. Isla qodobkaas wuxuu xaaraantinmaynayaa ku xoolaysiga sif sharci-darro ah, haddaba cashuuraha la kordhiyey xilli ay abaarta iyo shaqo la’aanta iyo maciishadii oo qaali garawday ay ummaddii isku raaceen miyey tahay wax loo eegay maslaxadda ummadda? Miyuuse xeer jideeyey oo Baarlamaankii xeer-dejinta ma la horkeenay intii aan la dhaqan galin?
Xukuumadda dadkooda u damqanayaa xilliyadan oo kale waxay dhiman cashuuraha, waxaanay kor-u-qaadaan adeegyada bulshada si ay ummadda dhibka ula qaybsadaan. Waxay ahayd in aad shidaal jaba oo degdeg ah noo doontaan ee ma ahayn in aad waqtigan $63 foostadii ku kordhisaan.
Inta aad ka warramaysaan hanti qof gaar ahi leeyahay bal madaxtooyadu haka warranto guriga dhawrka dabaq ah ee laga dhisayo meesha u dhaxaysa labada aqal ee Baarlamaanka ee aan miisaaniyadda qaranka ku jiri, miyaanay ahayn ku xoolaysi sharci-darro ah qodobka 14aad ee dastuurka sheegayo.
Waxaannu ku soo gebagebaynaa tixdan:
Waxa qallinka ugu diray
Dadku way tirsanayaa
Dayna waa ka maqan yahay
Isku digato ma ihine
Xaq haddaan ku daakiray
Dayrkii Makaan gubay.”
C/risaaq M. Dubbad, Somaliland.org, Hargeysa.
This entry was posted in News and tagged dekedda, dhaqaalaha, musuq, wakiilada. Bookmark the permalink.	Comments are closed.